China TIG စက်ရုံထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ Yunhua
GTAW ကိုသံမဏိများနှင့်အလူမီနီယမ်၊ မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့်ကြေးနီသတ္တုစပ်များကဲ့သို့သောသတ္တုမဟုတ်သောသတ္တုပါးသောအပိုင်းများကိုဂဟေဆော်ရာတွင်အများဆုံးအသုံးပြုသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်သည်အော်ပရေတာအားဂက်စ်အပေါ်ထိန်းချုပ်မှုပိုမိုကြီးမားသောထိန်းချုပ်မှုကိုပေးသည်၊ ထိုကဲ့သို့သောကာဗွန်ဒရိတ်ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ငွေ့သတ္တု arc ဂဟေဆော်ခြင်းကဲ့သို့သောပြိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်စဉ်များထက်ပိုမိုသောအရည်အသွေးရှိသောဂဟေများကိုခွင့်ပြုသည်။ သို့သော် GTAW သည် ပို၍ ရှုပ်ထွေးပြီးကျွမ်းကျင်ရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အခြားဂဟေဆော်နည်းများထက်သိသိသာသာနှေးကွေးသည်။ သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် plasma arc welding သည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသောဂဟေဆော်သည့် torch ကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုအာရုံစိုက်သောဂဟေဆော်သည့် arc တစ်ခုကို ဖန်တီး၍ ရလဒ်အဖြစ်မကြာခဏအလိုအလျောက်ပြုလုပ်သည်။
Yunhua သည် TIG ဂဟေဆော်နေစဉ်ကာလအတွင်းအထူးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကိုအသုံးပြုသည်။ အော်ပရေတာသည်လက်စွဲကိုလိုက်နာပြီးအကြိမ်ကြိမ်လေ့ကျင့်နိုင်လျှင်၎င်းကိုအလွန်လျှင်မြန်စွာကျွမ်းကျင်နိုင်မှသာအော်ပရေတာအတွက်အထူးလက်စွဲစာအုပ်ရှိလိမ့်မည်။
TIG ဂဟေဆော်ခြင်း၏ parameters တွေကို
input ကိုဗို့အား / ကြိမ်နှုန်းအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်
three-phase380V (+/-) 10% 50Hz
DC နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ ဂဟေဆော်သော Curren （A）
DC ကသွေးခုန်နှုန်း အမြင့်ဆုံး （A）
အခြေအနေ current A）
ကျား arc မှစတင်သောလက်ရှိ （A）
လျှပ်စီးကြောင်းရပ်တန့် arc （A）
TIG ရှေ့ပြေး arc စတိုင်
HF ကို arc
Yunhua သည်မတူညီသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုပေးနိုင်သည်။ အရေးပေါ် ဦး စားပေးမှုအရဖောက်သည်များသည်ရေကြောင်းနှင့်လေကြောင်းဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ YOO HEART စက်ရုပ်ထုပ်ပိုးခြင်းအမှုန်များသည်ပင်လယ်နှင့်လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် PL၊ မူရင်းလက်မှတ်၊ ငွေတောင်းခံလွှာနှင့်အခြားဖိုင်များကဲ့သို့သောဖိုင်များအားလုံးကိုပြင်ဆင်ပါမည်။ စက်ရုံတိုင်းကိုရက်ပေါင်း ၄၀ အတွင်းဖောက်သည်များထံမှသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းမရှိစေရန်စက်ရုပ်တိုင်းကိုသေချာစွာသယ်ဆောင်နိုင်သည့်အဓိကအလုပ်မှာလုပ်သားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်တိုင်းသည် YOO HEART စက်ရုပ်ကိုသူတို့မ ၀ ယ်မီသိသင့်သည်။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့် YOO HEART စက်ရုပ်တစ်လုံးရရှိပြီးနောက်သူတို့၏အလုပ်သမားသည် YOO HEART စက်ရုံတွင် ၃ ရက် ၃ ရက်အခမဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလိမ့်မည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ် WhatsApp အုပ်စုရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ လျှပ်စစ်၊ ခဲယဉ်းထည်များ၊ ဆော့ဝဲလ်များအပြီးတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။ ပြproblemနာတစ်ခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားပါကကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာရှင်သည်ပြcustomerနာကိုဖြေရှင်းရန်ဖောက်သည်ကုမ္ပဏီသို့သွားလိမ့်မည်။ ။
Q1 ။ စက်ရုပ် TIG ဂဟေဆော်ခြင်းစနစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအပလီကေးရှင်းတွေကဘာလဲ။
A. ပမာဏကြီးမား။ အမျိုးမျိုးသောအသုံးချပရိုဂရမ်များသည်စက်ရုပ်ဂဟေဆော်ရန်ကောင်းစွာသင့်တော်သည်; သို့သော်သင့်တော်သောကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်အတူအကောင်အထည်ဖော်ပါကအသံအနိမ့်အမြင့်အမျိုးမျိုးသော application များသည်လည်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည် စက်ရုပ်ဂဟေဆော်ခြင်းစနစ်သည်ကန ဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ခိုင်မာသည့်အကျိုးအမြတ်ကိုပေးနိုင်မနိုင်ဆုံးဖြတ်ရန်ကုမ္ပဏီများသည်ကိရိယာတန်ဆာပလာများအတွက်အပိုကုန်ကျစရိတ်ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ TIG ဂဟေဆော်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာမှာပါးလွှာသောအပိုင်းအစများနှင့်သတ္တုဖြစ်သည်။
Q2 ။ ဘယ်ဟာပိုကောင်းတာလဲ HF TIG ဂဟေလားသို့မဟုတ် TIG ဂဟေဆော်?
A. လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းကိုစတင်အသုံးပြုခြင်းသည်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းကို arc ထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်လေထုကို ionizing နှင့် tungsten point နှင့် work piece အကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးပေးနိုင်သည့်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းကို arc ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ High Frequency start သည်ထိတွေ့မှုနည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး tungsten ကိုမချင့်မချင်းဖြစ်စေ၊ အစ၌ startup တွင် amperage မြင့်လွန်းခြင်းမရှိပါကညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်လူမီနီယမ်ကိုဂဟေဆော်ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး၊ လက်ခံနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ သင် Aluminum ကိုဂဟေဆက်ရန်မလိုအပ်ပါကမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းစတင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် အကယ်၍ သင့်တွင်ထို option ရှိပါက AC သို့မဟုတ် DC ကိုဂဟေဆော်ရန်လိုသည်။
Q3 ။ YOO HEART TIG ဂဟေဆော်သည့်စက်ရုပ်သည်ဖလက်ကိုသုံးနိုင်သလား။
A.Yes, TIG ဂဟေဆော်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ Filler ကိုသုံးနိုင်သူအနည်းငယ်ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်မှပေးသွင်းသူများစွာကသူတို့၏စက်ရုပ်များကို TIG ဂဟေဆော်ရန်သုံးနိုင်သည်ဟုသင်ပြောကောင်းပြောလိမ့်မည်။ သူက HF ကိုမည်သို့စစ်ထုတ်ရမည်နည်း။ သင်၏စက်ရုပ်ကို TIG ဂဟေဆော်ရန် Tiller ဂဟေဆော်ရန်မေးနိုင်သည်။
Q4 ။ TIG ဂဟေဆော်တဲ့အခါသုံးတဲ့အရင်းအမြစ်ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ရမလဲ။
A. သင်၏ဂဟေစက်ကို DCEN (Direct current electrode negative) ဟုသတ်မှတ်သင့်သည်။ ၄ င်းတို့ကိုအလူမီနီယမ် (သို့) မဂ္ဂနီစီယမ်များမဟုတ်လျှင်ဂဟေဆော်ရန်လိုအပ်သောမည်သည့်အလုပ်အစိတ်အပိုင်းအတွက်မဆိုဖြောင့်သော polarity အဖြစ်လူသိများသည်။ အမြင့်ဆုံးကြိမ်နှုန်းကိုစတင်ရန်သတ်မှတ်ထားပြီး၎င်းကိုယနေ့ခေတ်တွင်အင်ဗာတာများတွင်တည်ဆောက်ထားသည်။ Post စီးဆင်းမှုကိုအနည်းဆုံး ၁၀ စက္ကန့်သတ်မှတ်ထားသင့်သည်။ A / C ရှိလျှင်၎င်းသည် DCEN နှင့်တိုက်ဆိုင်သော default setting ကိုသတ်မှတ်သည်။ contactor နှင့် amperage ခလုတ်များကို remote setting တွင်ထားပါ။ ဂဟေဆော်ရန်လိုအပ်သောပစ္စည်းကိုအလူမီနီယမ် polarity က A / C ထားသင့်ပါက A / C ချိန်ခွင်ကို ၇ ခန့်ထားသင့်ပြီးကြိမ်နှုန်းမြင့်ထောက်ပံ့ရေးသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်သင့်သည်။
Q5 ။ TIG ဂဟေဆော်နေစဉ်အကာအရံဓာတ်ငွေ့ထားရန်ဘယ်လို?
A. TIG ဂဟေဆော်ခြင်းအားဖြင့်ဂဟေဆော်သောဂတ်စ်ကိုဂဟေဆော်သောနေရာမှမသန့်ရှင်းစေရန်အသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ဤинертသောဓာတ်ငွေ့ကိုလည်းကာကွယ်သောဓာတ်ငွေ့အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။ ကိစ္စရပ်အားလုံးတွင်၎င်းသည်အာဂွန် (neon သို့မဟုတ် xenon) စသည့်အခြားအာဂွန်ဓာတ်ငွေ့များမဟုတ်သင့်ပါ။ 15 cfh ပတ်ပတ်လည်ထားသင့်သည်။ အလူမီနီယမ်ကိုသာဂဟေဆော်ရန် 50/50 အာဂွန်နှင့်ဟီလီယမ်ကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။
ရှေ့သို့ စက်ရုပ် HY-1010B-140 ကို တင်၍ ချပါ
နောက်တစ်ခု: Mig စက်ရုပ် welding